« CERCLE DE REFLEXION MUSULMANE » : Hanome tanana ny Filoha Andry Rajoelina hamahana ny olan’ ny solika
Tao anatin’ ny taona amaro, nihazakazaka be ny fiakaran’ ny vidin-tsolika, saika niakatra isan-taona izany teto amintsika. 10 janvier 2019
Tsy nanana vahaolana mahomby nentina nifehezana ny vidin-tsolika anefa ireo mpitondra Fanjakana nifandimby. Niafina tao ambadiky ny filazana momba ny “ fahamarinam-bidy ” fotsiny izy ireo. Nivoaka tamin’ ny fahanginany ny Sekretera jeneralin’ ny “ cercle de réflexion musulmane », Soalihy Moussa, ka nitondra fomba fijery mihataka amin’ ireo mpamatsy solika mahazatra an’ i Madagasikara. Vahaolana, hoy izy, ny fitodihantsika amin’ ireo Firenena Arabo.
Araka ny fanazavany hatrany fa “ iarahantsika mahalala fa tompon’ ny angovo ny firenena Arabo. Izahay amin’ ny maha Cercle de réflexion musulmane, dia manana tombony kokoa hifampiraharaha amin’ ireo Firenena Arabo mba hampidina ny vidin’ ny solika aty Madagasikara ”. Ao anatin’ ny Firenena Arabo rahateo dia misy lisitra ho an’ ireo Firenena mahantra ka ireo Firenena ao anaty lisitra dia omen’ izy ireo vidina solika mora lavitra noho ny vidina barila eo amin’ ny sehatra iraisam-pirenena. Tafiditra ao anatin’ ny fototra ihorenan’ ny mozilimana mihitsy izany araka ny fanazavany ao anatin’ ny “ zaka ”.
Nitodika tamin’ ny Filohampirenena Andry Rajoelina izy raha nilaza fa “ ny angatahanay amin’ ny Filoha vaovao, dia hoe : izahay afaka mifanaraka amin’ ireo Firenena Arabo ireo, mba hampandrosoana ny Firenena. Hitantsika fa raha vao miakatra 100 Ariary fotsiny ny vidin-tsolika dia henjana ny fiantraikany amin’ ny vidim-piainana. Raha tafapetraka anefa ny fiaraha-miasa amin’ ireo Firenena Arabo dia hidina hatrany amin’ ny antsany ny vidin-tsolika eto amintsika ”. Nitondra teny fiarahabana sy firariantsoa ny Filoham pirenena vaovao koa ny Sg ny Cercle de réflexion musulmane.